ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် dတစ်ဦးmper တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion.It ကျယ်ပြန့် သက်ဆိုင် သို့ ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စက္ကူ ချမှတ်ခြင်း, စွမ်းအား စက်ရုံ, အပူ, အလင်း စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် အခြား စက်မှုလုပ်ငန်း။ အဆိုပါ AOX-R ကို ကို စီးရီး ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ သငျ့လျြောသော ဘို့ တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ hတစ်ဦးrsh တွင်dustriတစ်ဦးl တစ်ဦးpplicတစ်ဦးtions, နှင့် မြင့်သော positionတွင်g ကို တစ်ဦးccurတစ်ဦးcy နှင့် compတစ်ဦးct construction.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း အပိုင်းner တွင် Chတွင်
1. Wide torque အကွာအဝေး: AOX-R ကိုသေးငယ်တဲ့လေးပုံတစ်ပုံ၏ torque လျှပ်စစ် actuator turn 30Nm-5000Nm ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးအနီးကပ်တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ဘို့ 2. တိုက်နယ်: ထိန်းချုပ်ခြင်း circuit ကို Single-အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးခု-အဆင့် power supply စံနှင့်တွေ့ဆုံ circuit ကို layout ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ပါတယ်, ဆိပ်ကမ်းကိုထိရောက်စွာအပိုဆောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်း။
အီလက်ထရောနစ်န့်သတ်ချက် switch ကို cam.The အနေအထားကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထူး tool ကိုမပါဘဲတိကျစွာနှင့်အဆင်ပြေသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်: 3. လွယ်ကူ AOX-R ကိုစီးရီးအနီးကပ်တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်ဘို့ cams ထားကြ၏။
AOX-R ကိုစီးရီးအနီးကပ်တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဖွင့်နှစ်ခု cable ကို entry ကိုရှိသည်, ပါဝါလိုင်းရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ signal ကိုလိုင်းကနေကွဲကွာနေသည်။
ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်လျှပ်စစ် actuators.In ထို့အပြင်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်အထူးကုများမှာကျနော်တို့လယ်ကိုလျှောက်လွှာအတွေ့အကြုံနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ် industry.Years နှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုများကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းအကြမ်းခံ AOX-R ကိုစီးရီးအနီးကပ်တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်ဖို့ AOX enabled ထားပါတယ် ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်မှုနှင့် sophisticted ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကသို့အပြည့်အဝပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်းသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာ AOX-R ကိုစီးရီး၏အသွင်အပြင်အနီးကပ်တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးဖွင့်လှစ်သေချာနိုင်ပါတယ်။
A: ပုံမှန် AOX-R ကိုစီးရီးအနီးကပ်တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်။
Q: သင့်ရဲ့ QC အလုပ်ထိုး?
ဖြေကျနော်တို့ကို 100% စစ်ဆေးရေး execute ။ စစ်ဆေးရေးပျက်ကွက်လျှင်ကုန်ပစ္စည်းများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက် reworking လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အရေအတွက်, ပုံး, ထုပ်ပိုး, အမှတ်အသားများ, ထုတ်ကုန်, စတိုင်, အရောင်အသွင်အပြင်နှင့်လက်ရာတိုင်းတာခြင်း data တွေကိုစစ်ဆေးနေကပ်။
Q: AOX-R ကိုစီးရီးအဘို့သင့်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. အနီးကပ်တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်?
hot Tags:: ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်